VIDEO: Kushiswe okungenani imoto eyodwa kuqhubeka isiteleka samatekisi e-PMB | News24
VIDEO: Kushiswe okungenani imoto eyodwa kuqhubeka isiteleka samatekisi e-PMB
Pietermaritzburg – Kokhelwe ngomlilo okungenani imoto eyodwa kwathi ezinye zajikijelwa ngamatshe ngesikhathi kuqhubeka isiteleka sabashayeli bamatekisi enkabeni yedolobha eMgungundlovu ngoLwesine.
Izithombe zemigwaqo evalwe ngamathayi avuthayo, imigqomo kadoti kanye nemoto eshayo bezizungeza ezinkundleni zokuxhumana.
Okhulumela iSouth African National Taxi Council (Santaco) eMgungundlovu, uBheki Sokhela, utshele iNews24 ukuthi lesi siteleka sihlelwe abashayeli bamatekisi abangeneme ngamathikithi "adulayo" abawanikezwa ngamaphoyisa kamasipala uMsunduzi uma bethulula abagibeli edolobheni.
"Sithe uma sivuka namhlanje (ngoLwesine), abashayeli bese bevele bengenele isiteleka. Bakhala ngokuthi amaphoyisa omgwaqo 'alwa' nabo uma ebanikeza amathikithi ekubeni amacala abasuke bewenzile emancane, okubalwa kuwo ukuthulula endaweni engafanele," esho.
Uthe abanye abashayeli babatshengisile amathikithi, amanye ngawemali elinganiselwa cishe ku-R7 000 ithikithi ngalinye.
Enkabeni yedolobha, kazikho izitobhi zokuthulula abagibeli bamatekisi, esho.
"Babuza ukuthi kufanele babehlisephi futhi kanjani abagibeli uma zingekho izitobhi. Abashayeli abamelene nemithetho yomgwaqo, kepha bacela ukuthi banikezwe amathikithi alingana namaphutha abawenzayo ukuze bezokwazi ukuwakhokhela," esho.
Abashayeli bacela nokuthi amaphoyisa angazenzi izivimbamgwaqo phakathi kuka-05:00 no-08:00 ekuseni.
USokhela uthe iSantaco ihlanganile nezikhulu zikamasipala yazinikeza uhlu lwezikhalazo zabashayeli.
"Bathembise ngokubuyela kithina ezinsukwini eziyisikhombisa," esho.
Uthe akazi lutho ngezimoto ezishaywe ngamatshe nezithungelwe ngomlilo.